Ity vokatra Sandwich Panel ity dia mampiasa ny hoditra ivelany ho fotony, izay vita amin'ny fibre fitaratra mitohy (tanjaka avo, henjana avo ary henjana be) mifangaro amin'ny resina thermoplastic. avy eo mifangaro amin'ny polypropylene (PP) renim-pianakaviana amin'ny alalàn'ny fizotran'ny fanamainana maharitra.
Sela solika hidrogen (sela elektrokimika)
Ny sela solika dia sela elektrokimika izay mamadika ny angovo simika amin'ny solika (matetika hidrôzenina) sy mpiasan'ny oxidizing (matetika oksizena) ho herinaratra amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra redoks roa. Ny sela misy solika dia tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny bateria amin'ny filàna solika sy oksizenina mitohy (matetika avy amin'ny rivotra) hitazomana ny fiota simika, fa amin'ny bateria kosa matetika dia avy amin'ny metaly sy ny ionony na oksida izay efa misy ao amin'ny bateria ny bateria. bateria, afa-tsy amin'ny bateria mikoriana. Ny sela solika dia afaka mamokatra herinaratra mitohy raha mbola misy solika sy oksizenina.
Product fampidirana (1) 280 wheelbase, ny boom dia mandray 3.0mm matevina fibre board, ary ny hatevin'ny fuselage dia 1.5mm carbon fiber board, izay miantoka ny tanjaky ny fiaramanidina amin'ny sidina ary mampihena tsara ny vibration; (2) Ny endriny tsy misy olona manontolo dia vita amin'ny takelaka fibre karbaona madio, izay maivana ary ny milina foana iray dia milanja 135g (ao anatin'izany ireo kojakoja UAV toy ny tsanganana alim-by bolt), izay kely ny habeny ary lava ny halavany fiainam-panompoana (3) Ny fusela ...
Ny bisikileta cell fuel dia manome tombony lehibe kokoa noho ny bisikileta bateria elektrika amin'ny lafiny roa sy ny famokarana solika. Raha matetika ny bateria dia maharitra adiny maromaro hamerenana amin'ny laoniny, ny varingarina hidrôzenina dia azo averina ao anatin'ny 2 minitra.
Sodina thermoplastic nohamafisina (RTP) dia teny iraisana ilazana ny fibre syntetika mahery azo itokisana (toy ny vera, aramid na karbonina)